2021 मा पोखरी संग yalta मा 10 सर्वश्रेष्ठ होटलहरू
दक्षिण कोस्टको दक्षिण तटनको अयोग्य राजधानी गर्मीको मौसममा सबै भन्दा राम्रो होटेलहरू घोषणा गर्दछ। बच्चाहरू, होटलहरू क्लियरिंग पोखरीसँग पाहुनाहरूका लागि आदर्श विकल्पहरू, अधिक मागको स्वाद र राम्रो "Perhheki" - अब स्नातक "- prodee मा एक विविधता!
मेट्टाको अवधिमा श doubt ्का भन्ने श doubt ्काको अवधिमा क्रान्तिको माग थाहा छ। मा साढोको मौसम हुन सक्छ मौसम मा निर्भर गर्दछ, जुलाई-को उचाई जुलाई-अगस्त मा देखिन्छ, र सेप्टेम्बर, तिनीहरू यहाँ जान रुचाउँछन्।
यलटा एक लोकप्रिय, विकसित र पुन: प्राप्तिको लागि दिशा निर्देशित छ। थोरै overficed मूल्यहरु को उच्च स्तर को एक उच्च स्तर को व्याख्या गर्न सजिलो छ, होटल कोठा को एक किसिम, शहर र को वरपरका शुद्ध झुकावहरु को शुद्ध झुकावहरु को लागी। मदिरा मासादारालाई वेस्टमेन्ट गरिएको छ, विश्व-वर्ग सम्मेलनहरूको होल्डिंगको प्रवण, चट्टान ग्रोजुउफ ...? कम्तिमा तपाईंको ध्यान।
yalta र अन्य अपराध रिसोर्टहरूको बारेमा अधिक तपाईं लेखमा पढ्न सक्नुहुन्छ। सबै यल्टाको सूची उपलब्ध छ।
रिच य्ट्टा वर्ग * * उच्च रेटिंग र धेरै सामान्य होटेल: 1- बेड कोठामा आवास: SIVENTES BELASSIN, नि: शुल्क Wi-FATE केन्द्र होटल जटिल को। बच्चाहरूको साथ कामदारहरूले विशाल गेमिंग क्षेत्रको कदर गर्दछन्, नविकलिट र घर भित्र नानी सेवाहरूमा बच्चाहरूको खेल मैदान। कम्प्लेक्स सेन्ट सेन्टेड एलेक्सान्डर न्यूस्की, यल्टा म्युदुकाउको ट्र्याक गर्ने क्षमतामा अवस्थित छन्, यल्टाको शहर को तटबन्ध।
सर्वश्रेष्ठ होस्टलहरू यलोट्रिक्टरी * * उच्च रेटिंग र सबैभन्दा सफल मूल्य / गुणस्तर: लेन्नको तटबन्धबाट आवासमा आवास। कोठाको थोरै संख्या (11) एक शान्त र रोमान्टिक छुट्टी छ। नि: शुल्क वाई-फाई होटल Boutuce भर उपलब्ध छ। आर्सेनलमा, होटलमा पारिवारिक कोठाहरू छन्, बच्चाहरू भएका यात्रुहरूले उपलब्धता र बोर्ड खेलहरूको उपलब्धता लिनेछ।
सबै भन्दा बढी फ्रिजेन्सबल होटल:2ओछ्यानको कोठामा बस्ने लागत: 500 रूबल / समयबाट: यल्टाको सब भन्दा प्रसिद्ध जानकारीको परिक्रमा। कम्प्लेक्स मासाडोरा पार्कमा अवस्थित छ, यसको आफ्नै समुद्री किनार छ र वयस्कहरूको लागि, साथै बच्चाहरूको लागि बासाको बाहिरी स्विमिंग पोखरी। समुद्री किनारमा समय मा समय मा छ मिनेट भन्दा बढी फिट छैन। होटल मा त्यहाँ धेरै बच्चाहरूको खेल मैदान, चिडियाखाना र एक ओडरियरियम। थप रूपमा, त्यहाँ एक राम्रो बच्चाको एनिमेसन छ।
हामी पनि सिफारिस गर्छौं कि Yallta मा अपार्टमेन्टमा ध्यान दिनुहोस् - रिसोर्टका पाहुनाहरूले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा मूल्य विकल्प। उच्च-रेसि। समुद्रको तटबाट 60000 मिटर हो। यात्रुहरू मेयरहरू2ओछ्यानको अंडरहरूले तीन र अधिक महँगो एक टेरेस वा बालकनीको साथ माउन्टेन वा अपार्टमेन्टहरू पत्ता लगाउँदछन्। दैनिक आवासको लागत , 800 रूबलबाट हो। यसले वातानुकूलित, केबल टेलिभिजन, नि: शुल्क वाइफाइ।
yalta व्यवसाय कार्ड 1 190 07
अपार्टमेन्ट EKEENENIN II एक Rosarium र Terey
होटल kils ताराहरू हाउट्सीमा kalta parts ताराहरूमा सबै समावेशी, त्रिपाविसार रेटिभविलेभरमा शीर्ष 10 उत्तम पाँच-स्टार यल्ला होटलहरू, तैयार यलोटा: तपाईको सेवामा यलोटा stars ताराहरूमा उत्तम होटल!
यल्टा अफ अफ अफ अफ अफ रिभियरको तस्वीरमा सरुवा गरिएको यल्टा त्रासनको तस्वीरमा सरुवा गरियो। यस मास्टपिसस एम नउवा नदी, हँगोल, हजुरआमाको हरियााउ - पौराणिक "ओरेन्डा" प्रधानमन्त्री होटल, 100 वर्ष भन्दा बढी यालटाको व्यवसाय कार्डको लागि।
ओरेन्डाले 1 190 0. मा आफ्ना अतिथि ढोका खोलिदिए र त्यसपछि शहरका सर्वश्रेष्ठ होटल मानिन्थ्यो। अहिलेसम्म सम्राट रोमानिनोको ईराका युएफको वातावरणमा राखिएको र अहिले "ओरेण्डा" प्रधानमन्त्रीले आधुनिक समझदायक समझदारीमा लक्जरी निकाय प्रस्ताव गर्छन्। होटलमा वास्तविक छुट्टीको आनन्द लिनका लागि सबै कुरा छ - "डलर डलर व्युत्धी" वा रमाईलो गर्न राम्रो: समुद्र तट, समुद्री पानी पोखरी, रेस्टुरेन्टहरू, फिटनेसन, फिटनेस र स्पा।
ब्यूटी सैन्यन र फिटनेस सेन्टरले उपयोगी स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको विभिन्न प्रकारका प्रस्ताव गर्दछ, अपडेट गर्दै र स्वास्थ्य पदोन्नति। चिसो मौसममा, धेरै आनन्दले समुद्री सतहमा रूसी स्नान प्रदान गर्दछ।
चेक इन: 00:00 प्रस्थानबाट: 12:00 PASTING सम्म: 24 घण्टा सुरक्षित पार्कि। सम्म। जनावरहरू: सायद अतिरिक्त शुल्कको लागि, पूर्व अनुरोधहरू
* उत्तम भौतिक विज्ञान संस्करणको अवलोकन। तिमी.त्य सामग्री व्यक्तित्व हो, विज्ञापन होइन र खरीदको लागि मार्गनिर्देशनको रूपमा सेवा गर्दैन। खरीद गर्नु अघि तपाईलाई विशेषज्ञको परामर्श चाहिन्छ।
यलटालाई सँधै हाम्रो देशको सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता बुद्धिमान हुन ठानिन्छ। यो बेकारमा छैन कालो समुद्रको मोती भनिन्छ। अविश्वसनीय प्रकृति र वास्तुकलाले आज रसियाका सबै क्षेत्रका लाखौं पर्यटकहरूको ध्यान आकर्षण गर्दछ। यहाँ, केवल आरामपूर्वक आरामदायी हुन सक्दैन, तर स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न, खनिज पार्क क्षेत्रमा सेन्टेरियम र हरियो पार्क क्षेत्रमा हरियो पार्क क्षेत्रमा प्रवेशप्रदारलाई सुदृढ पार्नुहोस्।
शहर खुला हावा संग्रहालय भनिन्छ। केवल सडकबाट जानुहोस्। प्रत्येक वर्ग मीटरले यल्टाको धनी ईतिहासको बारेमा बताउँछ, र पर्यटकहरूले ग्यालेस, पुरानो बेहोरा र मन्दिरहरू प्रशंसा गर्न सक्दछन्। मासडग्रा, एटी-पेट्री, यल्टा रिजर्भमा, प्राथमिक पार्कहरू केवल केही स्थानहरू हुन् जुन प्रत्येक भेटघाट यहाँ आउँदछ।
मौसम यति अनुकूल छ कि जाडोमा पनि तातो र आरामदायक छ। हिमालहरू चिसो बतासबाट सुरक्षित छन्, हिउँ एकदम थोरै खस्छ। अक्टुबरको अन्त्यमा तथ्या .्कका अनुसार तापक्रम मार्क + 20 ° सूचकमा समात्छ। यो विशेष गरी अजज्जत यल्टा बेमासलाई ध्यान दिन लायकको छ जसले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय फरक साइन इन प्राप्त गरेको छ - निलो झण्डा।
धेरै छुट्टीहरू हरेक वर्ष याल्टामा छुट्टीमा आउँनुहोस् र कहिले पनि थाहा छ र कहाँ बस्छन्। क्रिस्टिमिनेसन निर्देशनको हालै उभनिने लोकप्रियताको सम्बन्धमा, शहरमा प्रवाहलाई यो शहर छोडेर जान्छ, जो शहर द्वारा पहिलो पटक भ्रमण गरिएको छ। उनीहरूको लागि हामीले यलोआमा सबैभन्दा राम्रो होटेलहरूको सूची तयार पार्दछौं, जसमा बाँकीहरू उचाईमा सेवा, र द्रुत किनारको सबैभन्दा सुन्दर रिसोर्टको साथ अर्को बैठकमा रहनेछ। प्रायद्वीप को।
मा सबै भन्दा राम्रो होटेलको रेटिंग
रेटिंगको यस वर्गमा नेता यल्टा शहरी तटबन्ध, ऐतिहासिक आकर्षणहरू, पसल र फूड बजारमा निकट होटेल हो। उच्च स्तरको सेवाको अतिरिक्त, यो ENO सेवाहरू द्वारा विनियोजन गरिएको छ। सबै पाहुनाहरूको स्वास्थ्यलाई कायम राख्न डिजाइन गरिएको हो। त्यहाँ एक नुन गुफा छ, एक बाहिरी जिम, एक Fhttobar, ऑक्सीगन ककटेल, सुगन्धित तकिया र अधिक।
इजाजतपत्र प्लेट मानक, स्टुडियो र सुइटमा विभाजन गरिएको छ। कोठा इटालियन फर्निचर र प्लम्बिंग छ। डिजाइनमा, प्राकृतिक सुरक्षित सामग्री प्रयोग गरियो। ढोका इलेक्ट्रॉनिक लकहरूसँग सुसज्जित छन्। छनौटको लागि खाना: ब्रेकफास्ट बफे, आधा बोर्ड वा पूर्ण बोर्ड। पानारामिक विन्डोजसँग रेस्टुरेन्ट युरोपियन र स्थानीय भाँडा ज्ञात छन्। तपाईं बारमा नरम र मादक पेय पदार्थ पिउन सक्नुहुन्छ, जुन मध्ये एक समुद्री किनारमा अवस्थित छ।
बच्चाहरूले छुट्टै मेनूको रूपमा विकसित गरे र हाइचेयरहरू खुवाउनको लागि प्रदान गरिएको छ। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं नानी सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। निजी समुद्र तट क्यानडोज, सूर्य ओछ्यानमा र छाता संग सुसज्जित छ। नवविवाहित जोडीहरूको लागि, छुट्टै सेवाहरू प्रदान गरिएको छ। इको-होटल ठेगाना: प्राथमिक पार्क,3ए। फोन: +7978919191 77 77 75 75 75।